Warshadda dalabka alaabada ee Shirkadda Shiinaha iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
1. Xoog maado sare iyo miisaan fudud
Birtu waxay leedahay awood sarreysa iyo qaab dhismeedka laastikada ah. Isbarbardhig la taaban karo iyo alwaax, saamiga cufnaanta ay ku yeelanayso xoog waa mid hooseeya, sidaa darteed isla xaalad isku buuqsan, qaab dhismeedka birta wuxuu leeyahay qeyb yar, miisaanka fudud ee dhimanaya, si fudud loo raro loona rakibo , oo ku habboon qaabdhismeedka taako ballaaran, dherer sare iyo culeys culus.
2, adkeysiga birta, balaastigga wanaagsan, isku ekaanta maaddada, isku halaynta qaabdhismeedka sare
Waxay ku habboon tahay qaadista saameynta iyo culeyska firfircoon waxayna leedahay waxqabadka dhul gariirka wanaagsan. Qaab dhismeedka gudaha ee birta waa isku mid, ku dhowaad isotropic.The waxqabadka dhabta ah ee shaqada qaab dhismeedka birta ayaa waafaqsan fikradaha xisaabinta.Sidaa darteed qaab dhismeedka birta ayaa ah mid aad loogu kalsoonaan karo.
3, Swax soo saarka qaab dhismeedka teel iyo rakibidda heerka sare ee makaanikada
Xubnaha qaabdhismeedka birtu waa u fududahay in la iskugu geeyo warshadda iyo goobta dhismaha.Factory makaanikada waxsoosaarka qaybaha qaabdhismeedka birta ah waxay dhammeeyeen saxnaan sare, waxsoosaar sare oo wax soo saar leh, xawaaraha isku imaatinka goobta, waqtiga ugu yar ee xadidan.
4. Waxqabadka xiritaanka wanaagsan ee qaabdhismeedka birta
Sababtoo ah qaabdhismeedka alxanka ah ayaa gebi ahaanba la dabooli karaa, waxaa laga dhigi karaa weel cadaadis sarreeya oo leh hawo cabiran oo wanaagsan iyo ciriiri biyo, barkad saliid ballaaran, dhuumaha cadaadiska, iwm.
5, Qaabdhismeedka birta caabbinta kuleylka ma ahan caabbinta dabka
Marka heerkulku ka hooseeyo 150 ℃, sifooyinka birta waxyar baa iska beddela.Sidaa darteed, qaab-dhismeedka birta ayaa ku habboon dukaanka kulul, laakiin marka dusha sare ee qaab-dhismeedka lagu soo rogay shucaaca kuleylka ah ee ku saabsan 150 ℃, saxanka kuleylka kuleylka waa inuu Heerkulka wuxuu u dhexeeyaa 300 ℃ iyo 400 ℃ .Awoodda birta iyo qalabka wax soosaarka ayaa si aad ah hoos ugu dhacay, xoogga birtuna waxay u egtahay eber markii heerkulku ahaa qiyaastii 600 ℃ .Dhismooyinka leh shuruudaha gaarka ah ee dabka looga ilaaliyo, dhismayaasha birta waa in lagu ilaaliyaa walxaha diidan si loo wanaajiyo iska caabinta dabka.
6. Iska caabinta daxalka xun ee dhismaha birta
Gaar ahaan deegaanka dhexdhexaadka ah ee qoyan iyo xaalufka, qaab fudud oo birta ah miridhkiisa, qaab dhismeedka guud ee birta ah si loo mirroodo, galvanized ama rinjiga, iyo dayactirka joogtada ah. Dhismayaasha barxadaha badda ee badda dhexdeeda, tallaabooyin gaar ah sida "zinc block anodic protection" waa in la qaataa si looga hortago qashinka
7. Kaarboon yar, tamar keydin, cagaar, iyo dib loo isticmaali karo
Burburka dhismayaasha birta waxay soo saartaa ku dhowaad qashin dhisme oo birta dib ayaa loo isticmaali karaa.
Birta xoogga sare leh waa in ladarsaa si loo hagaajiyo xoogga dhibcaha dhalidda si aad ah Intaas waxaa sii dheer, noocyada cusub ee qaybaha, sida qaybaha H (oo sidoo kale loo yaqaanno qaybo ballaaran oo flange ah) iyo taargooyinka T-qaabeeya iyo qaabeeya, waa in la rogaa si loo daboolo baahiyaha dhismayaal dhaadheer iyo dhismayaal dhaadheer.
Wax soo saarka shirkadda waxaa badanaa loo isticmaalaa aqoon-isweydaarsiyo ballaadhan oo ballaadhan, kaydinta qabow, dhismayaasha xafiisyada, dhismooyinka xafiisyada, bakhaarrada, daadadka dhuxusha waaweyn, guryaha saldhigyada, xarumaha laga dukaameysto, hoolalka bandhigyada, jimicsiyada, xarumaha bandhigyada, xarumaha tareenka xawaaraha sare leh iyo warshadaha kale. xarumaha dhismaha dadweynaha .......
Kaydinta qabow xarunta silsiladda qabow
Mashruucu wuxuu ku yaal Yunnan, Shiinaha
Auto 4S dukaan
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Dali, Gobolka Yunnan
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Lijiang, Yunnan
Mashruucu wuxuu kuyaala gobolka Wa ee Myanmar
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Tachilek, Myanmar
Hore: Soo bandhig qayb ka mid ah alaabada shirkadda
Xiga: Fasalka Meelaha Birta ah